China API 594 wafer dual plate Valve ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ | စစ်ဆေးပါ။ Newsway
အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များ- API594၊ Check၊ Valve၊ Dual၊ Plate၊ Wafer၊ Flange၊ WCB၊ CF8၊ CF8M၊ C95800၊ class150၊ 300၊ 4A ၊ 5A၊ 6A၊ Bronze ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား- အရွယ်အစားများ- NPS2မှ NPS 48 ဖိအားအပိုင်းအခြား- အတန်းအစား 150 မှ Class 2500 End ချိတ်ဆက်မှု- Wafer, RF, FF, RTJ ပစ္စည်းများ- Casting- Cast Iron, Ductile Iron, A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A995 4A, 5A, A352 LCB, Mon, LCC, Inconel၊ Hastelloy၊UB6၊ Bronze၊ C95800 Standard ဒီဇိုင်းနှင့် API594 မျက်နှာချင်းဆိုင် ASME B16.10၊EN 558-1 End Connection ASME ကို ထုတ်လုပ်သည်။
သော့ လုပ်ဆောင်ချက်များ- API594၊ Check၊ Valve၊ Dual၊ Plate၊ Wafer၊ Flange၊ WCB၊ CF8၊ CF8M၊ C95800၊ class150၊ 300၊ 4A၊ 5A၊ 6A၊ ကြေး
အရွယ်အစားများ- NPS2မှ NPS 48 အထိ
Pressure Range: Class 150 မှ Class 2500
ချိတ်ဆက်မှုအဆုံးသတ်- Wafer၊ RF၊ FF၊ RTJ
Cast Iron ၊ Ductile Iron ၊ A216 WCB ၊ A351 CF3 ၊ CF8 ၊ CF3M ၊ CF8M ၊ A995 4A ၊ 5A ၊ A352 LCB ၊ LCC ၊ LC2 ၊ Monel ၊ Inconel ၊ Hastelloy ၊UB6 ၊ Bronze ၊ C95800
မျက်နှာချင်းဆိုင် ASME B16.10၊EN 558-1
ချိတ်ဆက်မှုအဆုံးသတ် ASME B16.5၊ ASME B16.47၊ MSS SP-44 (NPS 22 သာ)
စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်း။ API 598
အလိုက်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ NACE MR-0175၊ NACE MR-0103၊ ISO 15848
တခြား PMI, UT, RT, PT, MT
1. Dual Plate သို့မဟုတ် Single Plate
2. Wafer, Lug နှင့် Flanged
3. Retainless and Retain
API 594 Dual plate check valve ကို သန့်စင်သော ပိုက်လိုင်းများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ ရေသန့်စင်မှု၊ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများရှိ ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေနုတ်မြောင်း ပိုက်လိုင်းများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ စစ်ဆေးသည့်အဆို့ရှင်သည် wafer အမျိုးအစားကိုလက်ခံသည်၊ လိပ်ပြာပန်းကန်သည် စက်ဝိုင်းခြမ်းနှစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်အတင်းအကြပ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် စပရိန်တစ်ခုလက်ခံသည်၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်သည် ကိုယ်ထည်အပေါ်သို့ဂဟေဆော်နိုင်သော ဝတ်ဆင်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်း သို့မဟုတ် ရော်ဘာအဖုံးကို ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်၊ အသုံးပြုမှုအကွာအဝေးသည် ကျယ်ပြန့်သည်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
API 594 စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်၏ အဖွင့်နှင့်အပိတ် အစိတ်အပိုင်းများသည် ကြားခံအား ပြန်မစီးဆင်းစေရန် တားဆီးရန်အတွက် ကြားခံအား အဖွင့် သို့မဟုတ် အပိတ်ပြုလုပ်ရန် ကြားခံ၏ စီးဆင်းမှုနှင့် တွန်းအားအပေါ် မူတည်သည်။ valve ကို check valve လို့ခေါ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်များသည် ကြားခံအား လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းသို့ စီးဆင်းနေသည့် ပိုက်လိုင်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အလိုအလျောက်အဆို့ရှင်များ၏ အမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ယာဉ်မတော်တဆမှုများကို တားဆီးရန်အတွက် ကြားခံအား လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းသို့သာ စီးဆင်းခွင့်ပြုသည်။
check valve ၏တည်ဆောက်ပုံအရ၊ ၎င်းကိုသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ lift check valve, swing check valve နှင့် wafer စစ်ဆေးခြင်းအဆို့ရှင်. Lift check valve များကို ဒေါင်လိုက် နှင့် အလျားလိုက် နှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။ Swing check valve များကို single valve, double valve နှင့် multi valve ဟူ၍ အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားထားသည်။ wafer check valve သည် ဖြောင့်တန်းသော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ check valve သည် အရည်များ ပြန်မစီးဆင်းစေရန် အလိုအလျောက် တားဆီးပေးသည့် valve ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်၏အပိတ်သည် အရည်ဖိအား၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ပွင့်သွားပြီး အရည်များသည် အဝင်ဘက်ခြမ်းမှ ထွက်ပေါက်ဘက်သို့စီးဆင်းသည်။ ထွက်ပေါက်ဘက်ခြမ်းရှိ ဖိအားထက် နိမ့်သောအခါ၊ အရည်ဖိအားကွာခြားမှု၊ ဆွဲငင်အားနှင့် အခြားအချက်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် အရည်ပြန်မစီးဆင်းစေရန် အဆို့ရှင်အပိတ်သည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားပါသည်။
အဆို့ရှင်များအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လိုအပ်ပါက NSW (newsway valve) အရောင်းဌာနသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
ယခင်- API 6D Ball Valve
နောက်တစ်ခု: API 599 ပလပ် Valve
Newsway Valves ပစ္စည်းများ
NSW valve body နှင့် trim material ကို Forged type နှင့် Casting type ဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ သံမဏိနှင့် ကာဗွန်စတီးလ်ပစ္စည်းတို့အပြင်၊ တိုက်တေနီယမ်၊ နီကယ်သတ္တုစပ်များ၊ HASTELLOY®*၊ INCOLOY®၊ MONEL®၊ သတ္တုစပ် 20၊ စူပါနှစ်ထပ်၊ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ္တုစပ်များနှင့် ယူရီးယားအဆင့်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အထူးပစ္စည်းများဖြင့် အဆို့ရှင်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် UNS နံပါတ် Workstoff နံပါတ် အတုလုပ်ခြင်း။ သွန်း
ကာဗွန်သံမဏိ ကျပ် ၃၀၅၀၄ ၁.၀၄၀၂ A105 A216 WCB
ကာဗွန်သံမဏိ ၁.၀၄၆ A105N
Low Temp Carbon သံမဏိ K03011 ၁.၀၅၀၈ A350 LF2 A352 LCB
အထွက်နှုန်းမြင့်သော သံမဏိ K03014 A694 F60
3 1/2 နီကယ်သံမဏိ ၃၂၀၂၅ ကျပ် ၁.၅၆၃၉ A350 LF3 A352 LC3
5 Chrome၊ 1/2 Moly ၄၁၅၄၅ ကျပ် ၁.၇၃၆၂ A182 F5 A217 C5
1 1/4 Chrome၊ 1/2 Moly ၁၁၅၇၂ ကျပ် ၁.၇၇၃၃ A182 F11 A217 WC6
၁၁၅၉၇ ကျပ် ၁.၇၃၃၅
2 1/4 Chrome၊ 1/2 Moly ၂၁၅၉၀ ကျပ် ၁.၇၃၈ A182 F22 A217 WC9
9 Chrome၊ 1 Moly ၉၀၉၄၁ ကျပ် ၁.၇၃၈၆ A182 F9 A217 CW6
X 12 Chrome, 091 Moly ၉၁၅၆၀ ကျပ် ၁.၄၉၀၃ A182 F91 A217 C12
၁၃ရုန်း S41000 A182 F6A A351 CA15
17-4PH S17400 ၁.၄၅၄၂ A564 630
254 SMo S31254 ၁.၄၅၄၇ A182 F44 A351 CK3MCuN
304 S30400 ၁.၄၃၀၁ A182 F304 A351 CF8
304L S30403 ၁.၄၃၀၆ A182 F304L A351 CF3
310S S31008 ၁.၄၈၄၅ A182 F310S A351 CK20
316 S31600 ၁.၄၄၀၁ A182 F316 A351 CF8M
316L S31603 ၁.၄၄၀၄ A182 F316L A351 CF3M
316 Ti S31635 ၁.၄၅၇၁ A182 F316Ti
317L S31703 ၁.၄၄၃၈ A182 F317L A351CG8M
321 S32100 ၁.၄၅၄၁ A182 F321
321H S32109 ၁.၄၈၇၈ A182 F321H
347 S34700 ၁.၄၅၅ A182 F347 A351 CF8C
347H S34709 ၁.၄၉၆၁ A182 F347H
410 S41000 ၁.၄၀၀၆ A182 F410
904L N08904 ၁.၄၅၃၉ A182 F904L
လက်သမား ၂၀ N08020 ၂.၄၆၆ B462 N08020 A351 CN7M
Duplex ၄၄၆၂ S31803 ၁.၄၄၆၂ A182 F51 A890 Gr 4A
SAF 2507 S32750 ၁.၄၄၆၉ A182 F53 A890 Gr 6A
Zeron 100 S32760 ၁.၄၅၀၁ A182 F55 A351 GR CD3MWCuN
Ferralium® 255 S32550 ၁.၄၅၀၇ A182 F61
Nicrofer 5923 hMo N06059 ၂.၄၆၀၅ B462 N06059
နီကယ် ၂၀၀ N02200 ၂.၄၀၆၆ B564 N02200
နီကယ် ၂၀၁ N02201 ၂.၄၀၆၈ B564 N02201
Monel® 400 N04400 ၂.၄၃၆ B564 N04400 A494 M35-1
Monel® K500 N05500 ၂.၄၃၇၅ B865 N05500
Incoloy® 800 N08800 ၁.၄၈၇၆ B564 N08800
Incoloy® 800H N08810 ၁.၄၉၅၈ B564 N08810
Incoloy® 800HT N08811 ၁.၄၉၅၉ B564 N08811
Incoloy® 825 N08825 ၂.၄၈၅၈ B564 N08825
Inconel® 600 N06600 ၂.၄၈၁၆ B564 N06600 A494 CY40
Inconel® 625 N06625 ၂.၄၈၅၆ B564 N06625 A494 CW 6MC
Hastelloy® B2 N10665 ၂.၄၆၁၇ B564 N10665 A494 N 12MV
Hastelloy® B3 N10675 ၂.၄၆ B564 N10675
Hastelloy® C22 N06022 ၂.၄၆၀၂ B574 N06022 A494 CX2MW
Hastelloy® C276 N10276 ၂.၄၈၁၉ B564 N10276
Hastelloy® C4 N06455 ၂.၄၆၁ B574 N06455
တိုက်တေနီယမ် GR ၁ R50250 ၃.၇၀၂၅ B381 F1 B367 C1
တိုက်တေနီယမ် GR ၂ R50400 ၃.၇၀၃၅ B381 F2 B367 C2
တိုက်တေနီယမ် GR ၃ R50550 ၃.၇၀၅၅ B381 F3 B367 C3
တိုက်တေနီယမ် GR ၅ R56400 ၃.၇၁၆၅ B381 F5 B367 C5
တိုက်တေနီယမ် GR ၇ R52400 ၃.၇၂၃၅ B381 F7 B367 C7
တိုက်တေနီယမ် GR ၁၂ R53400 ၃.၇၂၂၅ B381 F12 B367 C12
API 594 စစ်ဆေးရန် ဗယ်ဗာ
API 594 WAFER စစ်ဆေးခြင်း ဗဲလ်
နှစ်ထပ် ဒစ်စကတ်စစ်ဆေးခြင်း ဗယ်လ်ဗာ
ပန်းကန်ပြားနှစ်ချပ် VAVLE စစ်ဆေးပါ။
DUO ပန်းကန်ပြားကို စစ်ဆေးပါ ဗယ်ဗာ
Wafer Check Valve ကို ကြွပါ။